Kulan xasaasi ah oo dhexmaray Wafdiga Arrimaha Dastuurka ee DF kuna sugan Garoowe & Guddoonka golaha Wakiilada Puntland, Maxaase laga hadlay? – PUNTLANDTIMES KA DHIGO WEHEL
Home 2018 February W.Gudaha, Wararka Maanta Kulan xasaasi ah oo dhexmaray Wafdiga Arrimaha Dastuurka ee DF kuna sugan Garoowe & Guddoonka golaha Wakiilada Puntland, Maxaase laga hadlay?
Kulan xasaasi ah oo dhexmaray Wafdiga Arrimaha Dastuurka ee DF kuna sugan Garoowe & Guddoonka golaha Wakiilada Puntland, Maxaase laga hadlay?
GAROOWE(P-TIMES)- Kulan muhiim u ah dib u eegista Arrimaha Dastuurka Soomaaliya ayaa ka dhacay magaalada Garoowe, kaas oo dhexmaray wafdi ka socda dawladda Faderaalka Soomaaliya, gaar ahaana Wasaaradda Dastuurka, Guddiyada dibu eegista Dastuurka oo ay ku jiraan xubnaha madaxa & golaha wakiilada ee Puntland, waxaana diiradda la saaray qodobada muhiimka ah ee taagan.
Dawlad gobaleedyada Soomaaliya ayaan isku raacsaneyn sidda loo kala leeyahay awoodaha dalka, si gaar ahna waxaa lays kugu qabsadaa nooca awoodeed ee dawlad gobaleedyada oo aan xataa ku cadeyn Dastuurka Qabyada ah ee dawladda Faderaalka Soomaaliya.
Is qabqabsiga awoodeed ee Hay’addaha dawladda Faderaalka ugu sareeya ayaa kamid ah arrimaha hurgumaha u ah arrimaha Dastuurka oo ay qolo kasta dhinaceeda la aadayso, una aragto sharciyad ay ku adkeysato taas oo keenta Xasilooni darro siyaasadeed.
Inta uu kulankan socday waxaa aad looga dooday Awoodaha ay kala leeyihiin dawladda Faderaalka & Dawladdaha xubnaha ka ah Faderaalka, si gaar ah ayaa looga hadlay qodobada ay inta badan ka dhashaan khilaafaadka, kuwaas oo qaarkood ay tilmaamayaan sidda loo wadagaato Kheyraadka dalka.
Wasiirka Dastuurka, Dimuquraadiyada iyo arrimaha Faderaalka Cabdifitaah Siciid Caynab ee dawladda Puntland ayaa ku sifeeyey wada hadaladan in ay gundhig u yihiin arrimaha Dibu eegista Dastuurka Soomaaliya.
Gudoomiye kuxigeenka koowaad ee golaha baarlamaanka Puntland Cabdixamiid Sh Cabdisalaan ayaa sheegay in dadaalada la wado ee dibu eegistaDastuurka ay muhiim u tahay Soomaaliya, loona baahan yahay in fikradaha iyo aragtiyada la mideeyo si loo garo halka loo socdo.
Wasiirka Dastuurka Faderaalka Soomaaliya Cabdiraxmaan Xoosh Jibriil ayaa ku sifeeyey kulankoodan mid muhiim u ah hanaanka geedi socodka Dastuurka, wuxuuna amaanay soo dhaweynta Puntland, isagoo sheegay in ay waajib tahay in wadajir qeyb looga noqdo arrimaha dibu eegista Dastuurka dalka oo masuuliyad weyn.
Guddiga Dibu eegistu waxay ku jiraan safaradooda ay ku tagayaan gudaha dalka, kuwaas oo ay ku aruuriyaan qodobada ay ku kala aragyi duwan yihiin Shacabka Soomaaliyeed, ka dibna waxaa soo bixi doona qodobada oo la turxaan bixiyey, gaar ahaana kuwa xasaasiyada leh oo ay ka mid yihiin Siyaasadda Dibada, Lacagta, Difaaca, Ciidamada, Nooca dawladeed ee awoodaha Madaxda sare iyo arrimo kale oo muhiim ah.
Guddiga labada Aqal ee dawladda Faderaalka Soomaaliya u saareen arrimaha Dastuurka ayaa ah kuwa ay saaran tahay masuuliyad adag oo u baahan in ay si taxadar leh u turxaan bixiyaan qodobada eedaha badan ka taagan yihiin, iyadoo maanka lagu hayo xaaladda adag ee Soomaaliya kasoo gudubtay.
Safarka guddigu wuxuu sii wadan doonaa maalinta nagu soo beegan, waxayna la kulmi doonaan inta badan qeybaha bulshada, laamaha maamulka Puntland iyo Cuqaasha oo ay kala hadlayaan suuragalnimada in la gaaro heshiis wadar ogol ah.
In la dhameystiro Dastuurka dalka, waxay muhiimad weyn u noqonaysaa Is aaminaada Soomaalida kala irdhowday iyo In la helo dawlad la yaqaano awooda ay leedahay, taas oo ah mid ay doonayaan Shacabka Soomaaliyeed.